WTTC: Arabia Saodita hampiantrano ny fihaonambe maneran-tany faha-22 ho avy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Arabia Saodita » WTTC: Arabia Saodita hampiantrano ny fihaonambe maneran-tany faha-22 ho avy
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Hatrany am-piandohana, rehefa nampitsahatra ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena ny areti-mifindra, dia naneho ny fanoloran-tenany tanteraka amin'ny sehatra misy antsika i Arabia Saodita, ary niantoka fa nijanona ho lohalaharana amin'ny fandaharam-potoana manerantany.
Ny Vovonana Maneran-tany fanao isan-taona an'ny WTTC no hetsika manan-danja indrindra eran'izao tontolo izao sy Travel & Tourism.
Ny hetsika any Arabia Saodita dia hanaraka ny Fihaonambe Maneran-tany andrasan'ny maro manaraka izay atao any Manila, Philippines.
Ny antsipiriany bebe kokoa momba ny Fihaonambe Global WTTC any Riyadh dia hambara amin'ny fotoana mety.
The World Travel & Tourism Council (WTTC), izay misolo tena ny sehatry ny Travel & Tourism eran-tany, dia manambara fa ny 22nd Hatao any Riyadh ny fihaonambe eran-tany, Arabia Saodita, amin'ny faran'ny taona 2022.
Ny Vovonana Maneran-tany fanao isan-taona an'ny WTTC no hetsika manan-danja indrindra eran'izao tontolo izao sy Travel & Tourism. Arabia Saodita nitarika fomba fiasa vaovao maneran-tany amin'ny 'famolavolana ny fizahantany' ary ity fihaonana an-tampony any Riyadh ity dia hahita ireo mpitarika ny indostria hivory miaraka amin'ireo solontenam-panjakana fototra mba hanohanana ny fanarenana mitohy ny sehatra, hamindra izany ho amin'ny hoavy azo antoka kokoa, maharitra, mahatafiditra ary maharitra.
Ny hetsika any Arabia Saodita dia hanaraka ny Fihaonambe Maneran-tany andrasan'ny maro manaraka izay hatao any Manila, Philippines, ny 14-16 martsa 2022.
Raha miresaka momba ny Future Investment Initiative any Riyadh, Arabia Saodita, Julia Simpson, WTTC Hoy ny filoha & CEO:
“Hatramin'ny voalohany, rehefa nampitsahatra ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena ny areti-mifindra, dia naneho ny fanoloran-tenany tanteraka amin'ny sehatra misy antsika i Arabia Saodita, ary niantoka fa nijanona ho lohalaharana amin'ny fandaharam-potoana manerantany.
“Nandray anjara lehibe tamin'ny fitarihana ny fanarenana ny sehatra iray tena manan-danja amin'ny toe-karena, ny asa ary ny fivelomana maneran-tany.
"Noho izany dia feno fankasitrahana izahay ary te-hahafantatra ny ezaka mahagaga ataon'izy ireo amin'ny fitondrana ny sehatry ny Travel & Tourism Global amin'ny Fanjakana amin'ny taona manaraka."
Andriamatoa Al Khateeb, Minisitry ny Fizahantany Arabia Saodita nanao hoe:
“Mankasitraka ny fanapahan-kevitra hifidy an'i Arabia Saodita ho firenena mpampiantrano amin'ny manaraka aho WTTC Fihaonambe maneran-tany tamin'ny taona 2022. Seha-pifanakalozan-kevitra lehibe ho an'ny sehatra tsy miankina sy ny governemanta ity mba hivondronan'ny fanavaozana ny fizahantany ho amin'ny ho avy, ary mahafinaritra ny manao ity hetsika ity ao amin'ny Fanjakana. Izany dia fankatoavana ny fitarihana Saodiana hanampy ny sehatry ny fizahantany maneran-tany ho tafarina, ary ny zava-dehibe dia ny haharitra kokoa. Tsy andriko ny hiarahaba ireo Mpikambana WTTC rehetra amin'ny taona ho avy.”
Mifanojo amin'ity fanambarana ity, ny fikarohana farany avy amin'ny WTTC dia mampiseho fa ny sehatry ny Travel & Tourism Moyen-Orient dia antenaina hitombo 27.1% amin'ity taona ity alohan'ny Eoropa sy Amerika Latina.
Nasehon'ny fikarohana ihany koa fa raha manao laharam-pahamehana ny Travel & Tourism ny governemanta dia mety hahatratra 6.6m amin'ny 2022 ny asa ao amin'ny sehatra, manakaiky ny haavon'ny pre-pandemic.